Nguva yekuverenga: 4 maminitsi Zvitima ndiyo nzira yakanakisisa kuenda kuItaly pasinei mwaka. zvisinei, ivo kuva ngozi uye vasununguka nezvechisarudzo, kunyanya munguva yechando. Winter chitima kufamba muItaly ngozi chete, asi zviri kutsanya uye akarongeka. This article was…
Nguva yekuverenga: 4 maminitsi Hapana kunzwa nani pane kudonha avete zvinyoronyoro kutamira chitima uye uchimuka mangwana nenguva yako kuenda, zvadzo maminitsi kubva mawere. In Europe, isu takapambwa kusarudza. It’s not…
Nguva yekuverenga: 3 maminitsi Pane imwe nguva, kana bhajeti haana nezvaanoita pakusarudza dzokugara (kana kanenge, kwete mikuru basa!) Zvinhu zvakanga nyore; mazuva ano, kana tichida kufamba, we have to be smart with the way we handle our…